Nyefee Videos si iPod aka ka Computer
> Resource> iPod> otú nyefee Videos si iPod aka ka Computer
Mkpa nyefee vidiyo si na iPod aka ka kọmputa? Mgbe ụfọdụ, i nwere ike weghaara ọhụrụ vidiyo na iPod aka na chọrọ dezie vidio ndị a na kọmputa. Ma ọ bụ nyefee vidiyo si na iPod aka ka PC maka ndabere. Ọ bụrụ otú ahụ, kama iji iTunes, i kwesịrị ịchọ ihe ngwa ime nke a. iTunes naanị nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPod aka, adịghị nyefee vidiyo si na iPod aka ka kọmputa. Ọ bụrụ na ị enweghị echiche banyere nke ngwá ọrụ na-eji, m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo Ochie ma ọ bụ Wonershare TunesGo Ochie (Mac). Ọ na-enye gị ka ị na idetuo iPod aka fim na kọmputa gị na ogbe, na-azọpụta oge na ike gị.
Download Wondershare TunesGo Ochie nyefee vidiyo si na iPod aka ka kọmputa! Ọ bụrụ na ị nwere MacBook Pro, MacBook Air ma ọ bụ onye iMac, biko ibudata mac version.
Otú nyefee vidiyo si na iPod aka ka kọmputa
Ndị na-esonụ ga-eduzi gị na mbupụ fim na kọmputa gị na nkọwa. Download na wụnye Wondershare TunesGo Ochie na kọmputa gị na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Launch TunesGo Ochie na jikọọ na iPod aka na kọmputa
Ẹkedori a usoro mgbe wụnye ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPod aka na kọmputa site na eriri USB na ọkụ gị iPod aka. TunesGo Ochie ga chọpụta ya n'otu ntabi na-egosipụta ya ke akpan window. Ị nwere ike ịlele faịlụ na iPod aka site n'aka ekpe ndekọ osisi nke isi window.
Cheta na: Tupu imalite iji TunesGo Ochie, biko wụnye iTunes na PC gị. Naanị na iTunes arụnyere, ọ bụ ike ịnyefe na vidiyo si na iPod aka ka kọmputa na TunesGo Ochie.
Nzọụkwụ 2. Copy vidiyo si na iPod aka ka kọmputa
Ka idetuo iPod aka videos na kọmputa, ihe mbụ ị ga-eme bụ iji pịa bọtịnụ "mgbasa ozi". Mgbe mgbasa ozi window egosi na nri n'akụkụ, pịa bọtịnụ "Movies". Na fim management window, ịhọrọ fim ị na-ekpebi mbupu, wee pịa "Export ka". Mgbe obere faịlụ nchọgharị windo na-egosi, ị nwere ike họrọ a zọpụta ụzọ. Mgbe ahụ, ka usoro ihe omume na-amalite na-akpali fim iPod aka ka kọmputa.
Cheta na: TunesGo Ochie Windows version akwado iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3-agba ọsọ na iOS 5 / iOS 6 / iOS 7 / iOS 8 / iOS 9, mgbe Mac version bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod aka 5 na iPod aka 4 dabeere na iOS 5/6/7/8/9.
Ọfọn, ekele! I jisiri ịkwaga vidiyo si na iPod aka ka kọmputa. Ugbu a, ị nwere ike ihichapụ ndị a na fim na gị iPod aka na-echekwa ọkacha mmasị gị ọdịnaya. E wezụga, ị pụrụ ịnụ ụtọ na fim na kọmputa gị kpam kpam.
Nyefee Videos si iPhone ka iTunes
Nyefee Photos si iPod aka ka PC Mfe
Olee otú Download BBC Radio na-iPod site iTunes